Disband လုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ 2NE1 အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Sandara Park ဟာ ကမ္ဘာကျော် Idol တစ်ယောက်ပါ ။
ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ပိုမိုငယ်ရွယ်နုပျိုနေတဲ့သူမဟာ ပလက်စတစ်ဆာဂျရီလုပ်စရာမလိုဘဲ နဂိုချောမောသူလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
အနုပညာလုပ်ခဲ့တဲ့သက်တမ်းလည်း ကြာရှည်နေပြီဖြစ်သလို ကမ္ဘာအနှံအပြားမှာလည်း သူမရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရှိနေပါတယ် ။
နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ သူမရဲ့ အနုပညာအကြောင်းကတော့ Fan တွေအားလုံးလိုလိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ... လူသိနည်းသေးတဲ့ သူမရဲ့ Personal အကြောင်းအရာအချို့ကို ကြည့်ကြရအောင်နော် ...
1. သူမဟာ 2NE1 ကိုမ၀င်ခင်ထဲက Cele တစ်ယောက်ပါ ။
2NE1 အဖွဲ့လေးဖြစ်မလာခင်ထဲက Dara ဟာ ဖိလစ်ပိုင်က ရုပ်ရှင်တွေ ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ၊ ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူးနေတဲ့ နာမည်ရှိပြီးသား Celebrity တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမဟာ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ချစ်သူတောင်ရှိခဲ့ပြီး Joseph Bitangcol လို့ခေါ်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်သား အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ 2009 လောက်ထိ သူတို့နှစ်ယောက်တွဲနေခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လမ်းခွဲသွားကြတာပါ ။
2. သူမရဲ့မောင်လေးဟာလဲ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။
Dara ချောသလို သူ့မောင်လေးကလည်း အလန်းစားလေးပါပဲ ။ ကိုရီးယားမှာ Thunder လို့လူသိများသူ နာမည်အရင်း Park Sang Hyun လို့ခေါ်တဲ့သူမမောင်လေးက MBLAQ ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ Thunder ရဲ့ Solo Music Video မှာတောင် Dara က featuring ၀င်ဆိုပေးခဲ့ပါသေးတယ် ။
3. သူမရဲ့ မွေးရပ်မြေက ဘူဆန်ပါ ။
သူမဟာ ဘူဆန်လေယူလေသိမ်းအတိုင်းလဲပြောဆိုတတ်ပါတယ် ။ ၈ နှစ်အရွယ်မှာ မိသားစုနဲ့အတူ ဖိလစ်ပိုင်ကို ပြောင်းသွားခဲ့ပြီး August 1, 2007 မှ မိသားစုနဲ့အတူပဲ ကိုရီးယားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ ။
4. အမြဲစာတွေပဲပို့လေ့ရှိတယ် ။
ဖုန်းပြောရတာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်သလို ခံစားရလို့ တစ်ခုခုပြောစရာရှိတိုင်း ဖုန်းခေါ်မယ့်အစား message ပဲပို့တတ်သူပါတဲ့ ။
5. T.O.P နဲ့ နမ်းခဲ့တာတစ်ကယ်မဟုတ်ပါဘူး
T.O.P ရဲ့ MV I’m Sorry ထဲမှာပါခဲ့တဲ့ Dara နဲ့ အနမ်းပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကွက်ဟာ တကယ်မနမ်းခဲ့ပါဘူး ။ ကင်မရာလှည့်စားချက်ပြုလုပ်ထားတာလို့ဆိုပါတယ် ။
6. ခွေးကြောက်တတ်ပါတယ် ။
သူမဟာ ခွေးတွေ အကောင်ကြီးတဲ့သတ္တ၀ါတွေဆိုအရမ်းကြောက်ပါတယ် ။ G-Dragon ရဲ့ခွေး Gaho တောင်မချန်ပါဘူး ။ Dara က Gaho ကိုလည်းကြောက်ပါတယ် ။
တစ်ယောက်ယောက်ကများ သူမ မက်ဆေ့တွေကိုမပြန်ဘူးဆိုရင်တော့ သူကို သူမ Contact list ထဲက ချက်ချင်းဖျက်လိုက်တော့တာပဲတဲ့ 2NE1 အဖွဲ့ဝင်အချို့ တောင် အဖျက်ခံရဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
သူမသဘောကျတဲ့ယောကျာင်္းပုံစံကတော့ မင်းသား Won Bin လိုပုံမျိုးပါတဲ့ ။ အခြားဆိုရင် သူမအကြိုက်ချင်းဆင်တူတဲ့ ယောကျာင်္းလေးတွေကိုလည်းသဘောကျပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ကြွက်သားအမြောင်းမြောင်းထနေတဲ့သူထက် ပိန်ပိန်သေးသေးလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတွေကိုပဲပိုကြိုက်ပါတယ်တဲ့ ။
Dara ဟာသူငယ်ချင်းတွေဆီက ဖုန်းတွေဖွက်ထားတတ်တယ် ၊ ဖုန်း background image တွေကို သူမပုံတွေလိုက်ပြောင်းပြီး စလေ့ရှိပါတယ် ။
10. သူမရဲ့ အမည်အကြောင်း
သူမရဲ့ နာမည်က ကိုရီးယားဗိုလ်ချုပ်ကြီး Kim Yushin ကနာမည်ကနေဆင်းသက်လာတာပါတဲ့ ။ ငယ်စဉ်က San Sa Ra လို့ခေါ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ... သဘောကျတယ် ဆို like and share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော် ... အခြားအနုပညာသတင်းတွေကိုလည်း www.aavashare.com မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် ... သာယာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေ ...